“ကမ္ဘာ နှစ်ခြမ်း ကွဲသွားခဲ့ရင်တောင် မင်းရှိတဲ့ ဘက်ခြမ်းမှာသာ ငါ … ရှင်သန်ပါရစေ” - APANNPYAY
/ “ကမ္ဘာ နှစ်ခြမ်း ကွဲသွားခဲ့ရင်တောင် မင်းရှိတဲ့ ဘက်ခြမ်းမှာသာ ငါ … ရှင်သန်ပါရစေ” “ကမ္ဘာ နှစ်ခြမ်း ကွဲသွားခဲ့ရင်တောင် မင်းရှိတဲ့ ဘက်ခြမ်းမှာသာ ငါ … ရှင်သန်ပါရစေ” Apann Pyay
“ကမ္ဘာ နှစ်ခြမ်း ကွဲသွားခဲ့ရင်တောင် မင်းရှိတဲ့ ဘက်ခြမ်းမှာသာ ငါ … ရှင်သန်ပါရစေ” ဆိုတဲ့ ဆရာမောင်လှမျိုး (ချင်းချောင်းခြံ) ရဲ့ ကဗျာစာသားလေးဟာ ဒီနေ့ မြန်မာ့ Social Media လောကမှာ Hit အဖြစ်ဆုံး စကားစုဖြစ်နေပါတယ်။ တကယ်လို့ ကမ္ဘာကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲသွားရင် ဘယ်ဘက်မှာ နေကြမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေ မေးကြ၊ GIF File လေးတွေဖန်တီးပြီး နောက်ကြပြောင်ကြ၊ Post တွေ တင်ကြပြီး စကြနောက်ကြနဲ့ ကမ္ဘာ နှစ်ခြမ်းတွေ ကွဲနေလိုက်ကြတာများ ပျော်စရာကြီးဗျို့။ ဒီတော့ Akhayar ပရိတ်သတ်ကြီးရေ “တကယ်လို့များ ကမ္ဘာကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲသွားခဲ့ရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ” လို့လေ့လာကြည့်ရအောင်လား။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ ပြောပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးက နှစ်ခြမ်းမကွဲနိုင်ပါဘူးတဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ကမ္ဘာကြီးကို ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရေထုက လွှမ်းခြုံထားပါတယ်။ အဲဒီအောက်မှာ မြေသားထုအလွှာပါးရှိပြီးတော့ အဲဒီအောက်မှာပဲ Asthenosphere ဆိုတဲ့ အစိုင်အခဲအလွှာတစ်ထပ်ရှိပါတယ်။ ဒီအလွှာရဲ့အောက်ကပ်လျက်မှာတော့ Stiff Mantle ဆိုတဲ့ အစိုင်အခဲအလွှာထုတစ်ခု ရှိနေပြန်ပါတယ်။ ဒီအစိုင်အခဲအပေါ်လွှာ ၃ ခုကိုပေါင်းပြီး The Mantle အလွှာလို့ ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ The Mantle အလွှာရဲ့ အောက်မှာတော့ အရည်တွေ (ချော်ရည်တွေ) နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Outer Core အလွှာကြီးရှိပြီး အဲဒီရဲ့အောက်အဝန်းအဝိုင်းပုံစံ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ဗဟိုစက်လုံးဖြစ်တဲ့ အတွင်းအကျဆုံး အစိုင်အခဲထုကြီးကိုတော့ Inner Core လို့ ခေါ်ဆိုပါတယ်။ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ အရည်အတစ်ထပ် အစိုင်အခဲတစ်ထပ် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ကမ္ဘာကြီးဟာ နှစ်ခြမ်း ဟက်တက်ကွဲဖို့တော့ ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိလှဘူးလို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက သုံးသပ်ကြပါတယ်။
တကယ်လို့များ ကမ္ဘာကြီးနှစ်ခြမ်း ကွဲအက်ခဲ့သည်ရှိသော်
ဟုတ်ကဲ့ တကယ်လို့များပေါ့လေ … ကမ္ဘာကြီးက နှစ်ခြမ်းမကွဲနိုင်ပေမယ့် အက်ကွဲသွားခဲ့သည်ရှိသော် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေက အခုလို သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။
(၁) တကယ်လို့ ကမ္ဘာမြေကြီးဟာ ရုတ်တရက် နှစ်ခြမ်းအက်ကွဲသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း တစ်ဖက်ချင်းစီရဲ့ ဆွဲငင်အားကြောင့် အလျင်အမြန် ပြန်ပူးကပ်သွားလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ပြောနေသလိုတော့ ဟိုဘက်ခြမ်းမှာနေမယ် ဒီဘက်ခြမ်းမှာနေမယ် ရွေးနေဖို့ အချိန်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ သက်ရှိတွေအားလုံး အလျင်အမြန် မျိုးတုန်းပျောက်ကွယ် ပျက်စီးကြရပါလိ့်မ်မယ်။
(၂) ပြင်းထန်တဲ့ မြေငလျင်လှုပ်မှုတွေ၊ ဆူနာမီတွေ၊ မြေပြိုမှုတွေ၊ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင်တော့ ကမ္ဘာမြေပြင်အောက်က ချော်ရည်ပူတွေ ကျောက်ရေပူတွေက မြေမျက်နှာပြင်ထက်ကို တက်လာပြီး အရာအားလုံးကို အရည်ဖျော်ပစ်ပါလိ့မ်မယ်။
(၃) ဒီဖြစ်ရပ်တစ်ခုလုံးက ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကြီးရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံတွေအပေါ် ကြီးကြီးမားမားသက်ရောက်မှုရှိတာကြောင့် ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အသွင်အပြင်နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ ရာသီဥတုတွေ မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီး သက်ရှိတွေမနေနိုင်လောက်တဲ့ အပူချိန်မျိုးနဲ့ နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ တည်ရှိသွားတာမျိုးပေါ့။
(၄) အချင်းချင်းအပြန်အလှန် ဆွဲငင်နေမှုကြောင့် နေကို ဘဲဥပုံ ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းအတိုင်း လှည့်ပတ်နေတဲ့ အရှိန်အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ အရှိန်နှုန်း နှေးကွေးသွားတာမျိုး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ နေ့တာညတာ ရှည်လျားသွားမှာဖြစ်သလို နေနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ မနက်ဘက်တွေမှာ ၄၂၇ Degrees Celsius အထိ ဆိုးရွားပြင်းထန်စွာပူပြီး နေနဲ့ မထိတွေ့ရတဲ့ ညဘက်တွေမှ ရေခဲမှတ်အောက် အနှုတ် ၃၀၀ Degrees Celsius အထိ အေးတတ်တဲ့ Mercury ဂြိုဟ်လိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
(၅) အဆိုးရွားဆုံး အကျိုးဆက်တွေထဲကတစ်ခုအဖြစ် ကမ္ဘာ့လေထုလွှာကြီးကိုလည်း ဆုံးရှုံးရပါလိ့်မ်မယ်။ Universe တွေ အများကြီးရှိပေမယ့် သက်ရှိတွေ ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ သင့်လျော်တဲ့ လေထုလွှာမျိုးရှိတဲ့ ဂြိုဟ်က အလွန်ရှားပါးလှပါတယ်။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်အနေနဲ့ ဒီလေထုလွှာကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရမယ်ဆိုရင် သက်ရှိတွေ ရှင်သန်နေထိုင်လို့ လုံးဝမရတော့တဲ့ ဂြိုဟ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပါလ်ိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကောင်းကင်ပြာကြီးဟာလည်း အမည်းရောင်အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲသွားပါလ်ိမ့်မယ်။
ကဲ အခရာပရ်ိသတ်ကြီးရေ …. ကမ္ဘာကြီး နှစ်ခြမ်းကွဲရင် ဘယ်ဘက်မှာနေကြမတုန်း။ အပေါ်က ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ နှစ်ခြမ်းမကွဲဖို့ပဲ မျှော်လင့်မိတယ်ဗျာ … ။
“ကမ်ဘာ နှဈခွမျး ကှဲသှားခဲ့ရငျတောငျ မငျးရှိတဲ့ ဘကျခွမျးမှာသာ ငါ … ရှငျသနျပါရစေ” ဆိုတဲ့ ဆရာမောငျလှမြိုး (ခငျြးခြောငျးခွံ) ရဲ့ ကဗြာစာသားလေးဟာ ဒီနေ့ မွနျမာ့ Social Media လောကမှာ Hit အဖွဈဆုံး စကားစုဖွဈနပေါတယျ။ တကယျလို့ ကမ်ဘာကွီး နှဈခွမျးကှဲသှားရငျ ဘယျဘကျမှာ နကွေမလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးမြိုးတှေ မေးကွ၊ GIF File လေးတှဖေနျတီးပွီး နောကျကွပွောငျကွ၊ Post တှေ တငျကွပွီး စကွနောကျကွနဲ့ ကမ်ဘာ နှဈခွမျးတှေ ကှဲနလေိုကျကွတာမြား ပြျောစရာကွီးဗြို့။ ဒီတော့ Akhayar ပရိတျသတျကွီးရေ “တကယျလို့မြား ကမ်ဘာကွီး နှဈခွမျးကှဲသှားခဲ့ရငျ ဘာတှဖွေဈလာမလဲ” လို့လလေ့ာကွညျ့ရအောငျလား။
သိပ်ပံပညာရှငျတှကေတော့ ပွောပါတယျ။ ကမ်ဘာကွီးက နှဈခွမျးမကှဲနိုငျပါဘူးတဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဖှဲ့စညျးပုံအရ ကမ်ဘာကွီးကို ပငျလယျသမုဒ်ဒရာရထေုက လှမျးခွုံထားပါတယျ။ အဲဒီအောကျမှာ မွသေားထုအလှာပါးရှိပွီးတော့ အဲဒီအောကျမှာပဲ Asthenosphere ဆိုတဲ့ အစိုငျအခဲအလှာတဈထပျရှိပါတယျ။ ဒီအလှာရဲ့အောကျကပျလကျြမှာတော့ Stiff Mantle ဆိုတဲ့ အစိုငျအခဲအလှာထုတဈခု ရှိနပွေနျပါတယျ။ ဒီအစိုငျအခဲအပျေါလှာ ၃ ခုကိုပေါငျးပွီး The Mantle အလှာလို့ ချေါဆိုကွပါတယျ။ The Mantle အလှာရဲ့ အောကျမှာတော့ အရညျတှေ (ခြျောရညျတှေ) နဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ Outer Core အလှာကွီးရှိပွီး အဲဒီရဲ့အောကျအဝနျးအဝိုငျးပုံစံ ကမ်ဘာကွီးရဲ့ဗဟိုစကျလုံးဖွဈတဲ့ အတှငျးအကဆြုံး အစိုငျအခဲထုကွီးကိုတော့ Inner Core လို့ ချေါဆိုပါတယျ။ ကမ်ဘာမွကွေီးရဲ့ အရညျအတဈထပျ အစိုငျအခဲတဈထပျ ဖှဲ့စညျးပုံအရ ကမ်ဘာကွီးဟာ နှဈခွမျး ဟကျတကျကှဲဖို့တော့ ဖွဈနိုငျခွမေရှိလှဘူးလို့ သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ သုံးသပျကွပါတယျ။
တကယျလို့မြား ကမ်ဘာကွီးနှဈခွမျး ကှဲအကျခဲ့သညျရှိသျော
ဟုတျကဲ့ တကယျလို့မြားပေါ့လေ … ကမ်ဘာကွီးက နှဈခွမျးမကှဲနိုငျပမေယျ့ အကျကှဲသှားခဲ့သညျရှိသျော ဘာတှဖွေဈလာနိုငျမလဲဆိုတာကို သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ အခုလို သုံးသပျထားကွပါတယျ။
(၁) တကယျလို့ ကမ်ဘာမွကွေီးဟာ ရုတျတရကျ နှဈခွမျးအကျကှဲသှားခဲ့မယျဆိုရငျလညျး တဈဖကျခငျြးစီရဲ့ ဆှဲငငျအားကွောငျ့ အလငျြအမွနျ ပွနျပူးကပျသှားလိမျ့မယျ။ ကြှနျတျောတို့ပွောနသေလိုတော့ ဟိုဘကျခွမျးမှာနမေယျ ဒီဘကျခွမျးမှာနမေယျ ရှေးနဖေို့ အခြိနျရှိမှာမဟုတျပါဘူး။ ကမ်ဘာမွပေျေါမှာ နထေိုငျကွတဲ့ သကျရှိတှအေားလုံး အလငျြအမွနျ မြိုးတုနျးပြောကျကှယျ ပကျြစီးကွရပါလျိ့မျမယျ။
(၂) ပွငျးထနျတဲ့ မွငေလငျြလှုပျမှုတှေ၊ ဆူနာမီတှေ၊ မွပွေိုမှုတှေ၊ မီးတောငျပေါကျကှဲမှုတှေ ဖွဈပျေါလာပါလိမျ့မယျ။ ပွီးရငျတော့ ကမ်ဘာမွပွေငျအောကျက ခြျောရညျပူတှေ ကြောကျရပေူတှကေ မွမေကျြနှာပွငျထကျကို တကျလာပွီး အရာအားလုံးကို အရညျဖြျောပဈပါလိ့မျမယျ။
(၃) ဒီဖွဈရပျတဈခုလုံးက ကမ်ဘာဂွိုဟျကွီးရဲ့ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ဖှဲ့စညျးပုံတှအေပျေါ ကွီးကွီးမားမားသကျရောကျမှုရှိတာကွောငျ့ ကမ်ဘာကွီးရဲ့ ပတျဝနျးကငျြအသှငျအပွငျနဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှဟော အကွီးအကယျြပွောငျးလဲသှားပါလိမျ့မယျ။ ဥပမာ ရာသီဥတုတှေ မတညျမငွိမျဖွဈပွီး သကျရှိတှမေနနေိုငျလောကျတဲ့ အပူခြိနျမြိုးနဲ့ နှဈထောငျပေါငျးမြားစှာ တညျရှိသှားတာမြိုးပေါ့။
(၄) အခငျြးခငျြးအပွနျအလှနျ ဆှဲငငျနမှေုကွောငျ့ နကေို ဘဲဥပုံ ဂွိုဟျပတျလမျးကွောငျးအတိုငျး လှညျ့ပတျနတေဲ့ အရှိနျအပျေါမှာ သကျရောကျမှုရှိနိုငျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့တော့ အရှိနျနှုနျး နှေးကှေးသှားတာမြိုး ဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။ ဒါဆိုရငျတော့ နတေ့ာညတာ ရှညျလြားသှားမှာဖွဈသလို နနေဲ့ထိတှရေ့တဲ့ မနကျဘကျတှမှော ၄၂၇ Degrees Celsius အထိ ဆိုးရှားပွငျးထနျစှာပူပွီး နနေဲ့ မထိတှရေ့တဲ့ ညဘကျတှမှေ ရခေဲမှတျအောကျ အနှုတျ ၃၀၀ Degrees Celsius အထိ အေးတတျတဲ့ Mercury ဂွိုဟျလိုဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။
(၅) အဆိုးရှားဆုံး အကြိုးဆကျတှထေဲကတဈခုအဖွဈ ကမ်ဘာ့လထေုလှာကွီးကိုလညျး ဆုံးရှုံးရပါလျိ့မျမယျ။ Universe တှေ အမြားကွီးရှိပမေယျ့ သကျရှိတှေ ရှငျသနျနထေိုငျဖို့ သငျ့လြျောတဲ့ လထေုလှာမြိုးရှိတဲ့ ဂွိုဟျက အလှနျရှားပါးလှပါတယျ။ ကမ်ဘာဂွိုဟျအနနေဲ့ ဒီလထေုလှာကို ဆုံးရှုံးလိုကျရမယျဆိုရငျ သကျရှိတှေ ရှငျသနျနထေိုငျလို့ လုံးဝမရတော့တဲ့ ဂွိုဟျကွီးတဈခုဖွဈသှားပါလျိမျ့မယျ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ကောငျးကငျပွာကွီးဟာလညျး အမညျးရောငျအဖွဈကို ပွောငျးလဲသှားပါလျိမျ့မယျ။
ကဲ အခရာပရျိသတျကွီးရေ …. ကမ်ဘာကွီး နှဈခွမျးကှဲရငျ ဘယျဘကျမှာနကွေမတုနျး။ အပျေါက ဖွဈရပျတှဖွေဈလာနိုငျတယျဆိုတော့ ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ နှဈခွမျးမကှဲဖို့ပဲ မြှျောလငျ့မိတယျဗြာ … ။